भारतले बनाएका तराई डुवाउने २० बाँधहरु कहिले र कसरी बाँधिए? बिस्तृतमा हेर्नुहोस « Postpati – News For All
भारतले बनाएका तराई डुवाउने २० बाँधहरु कहिले र कसरी बाँधिए? बिस्तृतमा हेर्नुहोस
भारतले नेपालसँग सम्झौता गरी बनाएका ४ वटा वैध र १६ वटा अवैध बाँधका कारण यसरी वर्षैपिच्छे तराई डुब्ने गरेको छ । तराईका हरेक जिल्ला छुनेगरी भारतले बनाएका ती बाँधहरु कहिले कसरी बनाइए ? विस्तृतमा हेर्नुहोस्:
(चक्रपथका लागि बिनु पोखरेलले तयार पारेको लेखबाट साभार)